Somalia online: Madaxweynaha Puntland oo u sheegay bulshada Gaalkacyo in la joogo waqtigii ay wada-jir uga shaqeyn lahaayeen amniga iyo horumarka
Madaxweynaha Puntland oo u sheegay bulshada Gaalkacyo in la joogo waqtigii ay wada-jir uga shaqeyn lahaayeen amniga iyo horumarka
Gaalkacyo (RBC Radio) Madaxweynaha Puntland,Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) ayaa ku war-galiyay bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo oo xarun u ah gobolka Mudug in la joogo waqtigii ay iyagu wax-qabsan lahaayeen.
Waxuu sheegay madaxweyne Cabdiweli in dowladda ay waqti badan galisay Gaalkacyo waxbadana loo qabtay,balse hadda laga doonayo shacabka inay iyagu wada-jir uga shaqeeyaan amnigooda iyo horumarka deegaanka.
“Hadda waxaa la jooga waqtigii ad wada-jir uga shaqeyn laheydeen nabad-galyadiina iyo horumarkiina,”ayuu yiri madaxweyne Cabdiweli. “Dowladda waxay waqti-galisay magaalada Gaalkacyo,balse maanta oo la jooga reer Gaalkacyoodka ayaa looga bahan-yahay inay wax-qabtaan,”ayuu ku darey hadalkiisa.
Madaxweynaha waxuu hadalkan ka jeediyay munaasabad Sabtidii shalay lugu doortay guddoomiyaha cusub ee degmada iyo ku-xigeenkiisa,waxuuna marka u rajeeyay ragga dhallinyarada ah ee ku guuleystay hoggaaminta degmada inay ka soo dhalaalan shaqada ay qabanayaan.
Madaxweynaha ayaa la filaya inuu soo gaba-gabeeyo booqasho wax ka badan labo toddobad qaadatay oo u ku joogay magaalada Gaalkacyo,taaso ka dambeysay markii falal amniga wax u dhimayay iyo dilal ay magaalada ku soo laab laabteen.